Sandals: Yepasirese-nyeredzi shanu yepasirese yaisanganisira nzvimbo dzekugara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals: Yepasirese-nyeredzi shanu yepasirese yaisanganisira nzvimbo dzekugara
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Curacao Kuputsa Nhau • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts uye Beaches inoratidzira yepasirese yakazara yakazara-inosanganisira mashanu-nyeredzi mapakeji epasireti apo vashanyi vanogona kunakidzwa naka chena jecha-jecha mahombekombe, Global Gourmet ™ yekudyira, pekugara pakanaka, risingaperi premium doro, inonakidza mitambo yemvura, nezvimwe.
Kana Sandals Resorts ichiti zvese-zvinosanganisa, zvinoreva kuti zvese-zvinosanganisa munzira dzese dzaungafungidzira uye nenzira yechishanu-nyeredzi.
Iko hakuna mhosva dzakavanzika kana kushamisika, uye zviitiko zvevaenzi zvakakurisa uye zvinosvika kupfuura zvinotarisirwa.
Kubva paminiti muenzi paanoburuka mundege, zvese zvinotarisirwa kubva kuchipatara kuenda kune matipi - kubva pakutanga kwezororo kusvika panguva iyo vashanyi vanokwira ndege kudzokera kumba.
Ichokwadi ndechekuti zvimwe zvinonzi zvese-zvinosanganisira zvinowedzera pamitero - senge mitero yehurumende, kuwedzerwa kwendege, madhiragi eprimiyamu, mabasa akakwidziridzwa, kwekudyira kwakasarudzika, uye kurapa. Kutaura nezve kupeta, heino zano. Izvi hazvife zvakamboitika paSandals, nekuti zvese zvese zvakasanganiswa, uyezve hapana zvakavanzika zvakavanzika uye hapana kushamisika, kunze kwezvinhu zvese zvinoshamisa zvavanoita zvinosanganisira - seyechokwadi shanu-nyeredzi.
Sandals ndeyenyika chete 5-nyeredzi yemhando yepamusoro yaisanganisira nzvimbo yekutandarira uko inogara iri yese-inosanganisira nguva dzese. Shangu dzinopa vashanyi mamwe emhando inclusions kupfuura chero mamwe maresitoreti epasi. Semuenzaniso, Sandals inosanganisira yakasarudzika sarudzo mumitambo yemvura - kunyangwe ine mota - zvese zvinosanganisirwa, kusanganisira kuraira. Sandals chete dzinosanganisira mazuva ese scuba diving pamwe nehunyanzvi scuba giya, mahunyanzvi ehunyanzvi, Newton dive zvikepe, uye nzvimbo dzakanakisa dzekudyira muCaribbean.
Pasi, maSandals anosanganisira mitambo yakanyanya kuwanda segorofu ine muripo wemari yakasvibirira - kutenderera mushure mekutenderera pasina kumhanya-kutenderera. Hapana zvimwe zvese zvinosanganisira Greg Norman-yakagadzirirwa makwikwi egorofu.
Iyo suite sei
Kusvika pekugara, hapana chakatarwa pamusoro peSandals suites, inopa akawanda pamusoro-e-pamusoro masutu akadai seSkypool Suites, Swim-Up Suites, Millionaire Suites, Rondoval Suites munzvimbo dzakatenderedza, Kumusoro-kwe-Mvura Villas, uye Pamusoro peMvura-Bungalows. Uye chete maSandali anosanganisira voga vatengesi mune yavo yekuda nest nest Butler Suites.
Zvese zvinodhaka zveprimiyamu zvinosanganisirwa nguva dzese - hapana chikonzero chekumirira imwe chete nguva inofadza muzuva. Kune anosvika gumi nembiri mabhawa munzvimbo yega yega yekutarisisa isina ma tabo uye isina miganho. PaSandals, vashanyi vanogona kunakidzwa nekudonhedzwa kusingagumi kweRobert Mondavi Twin Oaks waini.
Specialty yekudyira paSandals ndeye, zvakanaka, hunyanzvi. Shangu dzinosanganisira risingaperi chero nguva 5-nyeredzi yepasi rese gourmet yekudyira kusvika kusvika gumi nematanhatu maresitorendi pane imwe nzvimbo. Yeresitorendi yega yega inoratidzira yepasirose-chef inoshandisa freshest purazi-kune-tafura zvigadzirwa.
Yese Sandals zvese-zvinosanganisira zororo pasuru zvinosanganisira:
DYA + DZWA
5-nyeredzi gourmet yekudyira kusvika gumi neshanu Restaurants pane imwe nzvimbo yekutandarira
Kudya kwemangwanani, masikati, kudya kwemanheru uye chero nguva zvekudya
Unlimited premium doro
Kusvikira kune gumi nembiri mabhawa pane imwe nzvimbo yekutandarira
Mazai akachengetwa mukamuri dzese
Unlimited Robert Mondavi Mapatya Oaks® waini
PADI-Akasimbiswa scuba diving (nemidziyo yese)
Snorkeling nzendo (uye zvese zvishandiso)
Hobie Cats, paddle board, kayaks
Unyanzvi hwehunyanzvi hwemitambo yemvura
Private offshore zviwi paSandals Royal Caribbean neSandals Royal Bahamian
Mari dzeGreen kwatinadzo gorofu makosi musarudzo resorts
Volleyball yegungwa, basketball, matafura edziva
Masikati neusiku tenesi
Fitness centre nemidziyo yechizvino-zvino
Masikati neusiku varaidzo kusanganisira mhenyu inoratidza
Injini mitambo yemvura kunzvimbo dzakasarudzwa dzekugara
sanganisira Chinjana Ropafadzo pakati pekugara
Matipi ese, mitero nezvipo
Roundtrip airport yendege
Yakasarudzika Airport Kusvika Lounge muJamaica neSaint Lucia
Ese maSandals resorts vanhu vakuru-chete, akagadzirirwa vakaroorana murudo
Mahara WiFi (mukamuri nenzvimbo dzose dzinozivikanwa)
Muchato wakasununguka (kwekugara kwehusiku hutatu kana kupfuura)
Personal Butler Service uye zvakavanzika kuendesa mune akawanda epamusoro-tier masuti